कथा : जन्तिबास - नेपालबहस
कथा : जन्तिबास
| १५:२७:५८ मा प्रकाशित
प्राचीन दुल्लू राज्य अन्तर्गत दैलेखकाे कल्याणकांध चुलीकाे फेदी हाे जन्तिबास । सिंजा राज्य अन्तर्गतका मानिसहरुकाे हाट परम्पराकाे एक बास हाे जन्तिबास । सेपिलाे पश्चिमी काेल्टाे । वनभरी लटरम्म सिल्टिमुर । निहुँ खाेज्दै आउने ठुलाे झुसे सिस्नाे । वनचरी र वनपाले पाेथ्रापाथ्री अनि नजिकैकाे झरनाकाे पानीले अनवरत नुहाईरहने अचाक्ली चिसा गरगरे ढुंगाहरु र सुसाईरहने कर्णालीकाे सिरेटाेकाे संगम हाे जन्तिबास ।
राति उज्यालिने र दिउँसाे अध्यारिने जन्तिबास कैयाैं जन्तीहरुकाे बिसाैनी पनि बनेकाे थियाे उसबेला । कर्णाली तिरमा याे भन्दा उपयुक्त ठाउँ थिएन । उम्रा, कालाेगल्बा, खुर्सानीबारी, हल्गाडे र कल्जयानकांध जस्ता बिसाैनी छिचाेल्दै यहाँ आउने जाने जन्तीहरुका लागि फराकिलाे र फरासिलाे बास थियाे याे ठाउँ । यसैले हाेला याे जन्तिबास कहलिएकाे ।
दैलेखकाे तल्लाे डुंगेश्वर पञ्चकाेशीधामबाट मधेसिदै झरेकाे कर्णाली नदी यही एक बासकाे थकान बिसाएर फनक्क फेराे मार्न हिड्छ अछामलाई । जन्तिबासकाे बिसाैनीमा फनफनी घुमेकाे कर्णालीकाे याे ठाउँलाई च्याउमुढा र रिङ्नेसाेती पनि भनिन्छ । कुनै बेला यस कर्णाली काेरीडाेरमा ओहाेरदाेहाेर गर्ने सिंजा राज्यका रैतीहरु यात्रामा एक बास बसेरै छाड्थे जन्तिबास । सायद तिनैले भेटेकाे हुनुपर्छ, मुढामा च्याउ अनि राखे हाेलान च्याउमुढा नाम । रिङ्नेश्वतिमा भने कर्णाली भुमरी झैं अझै अनवरत घुमिरहेकै छ ।
संघीय नेपालकाे परिकल्पनामा कर्णाली करिडाेरकाे उपमा पाए पनि प्राचीन धार्मिक ईतिहास र किवदन्तीहरुमा पाण्डव मार्ग भनेर उल्लेख गरेकाे पाईन्छ यसलाई । अचेल भने कर्णाली नदी राफ्टिङ्का पारखीहरुकाे लागि पनि विश्रामस्थल बनेकाे छ याे क्षेत्र ।
बाल्यकालमै तराई झार्दा मामाकाे काेखेलाेमा एक बासकाे नाता जाेडेकाे छु मैले पनि जन्तिबाससँग । मलाई भने अनुभव भएन जन्तिबासकाे उतिबेला । हुम्ली, मुगाली, जुम्ली, कालीकाेटे, दैलेखी अनि सुर्खेती जनताकाे वर्षेनि १५/२० दिनकाे एकाेहाेराे हिडाईकाे मेलाे हाे जन्तिबास । तराईका कटांसे र राजापुर अनि भारतकाे पलियाँ र टिकुनियाँसम्म हाटबजार गर्नेहरुका लागि मध्येबिसाैनी थियाे याे ।
तल रिङ्नेश्वतिकाे सिरेटाेकाे तिखाेले चियाए पनि जन्तिबासकाे ओसिलाे, फराकिलाे काेल्टाे र हटारुहरुकाे रापिलाे अगेनुले ओढाउ बिनाकालाई कहिल्यै कठ्याङ्रिदाे पारेन जन्तिबासले । जन्तिबासकाे काेखेलाेमा आईपुग्ने, हुने नहुने सबैलाई समान धाप दिई रहन्थ्याे यसले । हटारु र बटुवाहरुले बिहानै थलाे छाेड्दा चकमन्न भई रन्थनिने यसले कल्यान, सेप्टि लगायतका छिमेकी गाउँका गाेठालाका सुरिला वनभाका, पशुका घण्टीका आवाज, कर्णालीकाे सुस्केरा अनि वनचरीहरुका चिरबिरहरुकाे आडमा पुरै दिनहरु बिताएकाे छ ।
आजभाेलि भने जन्तिबास माैन छ । निसासिएकाे छ । अनि पुरै एक्लिएकाे छ । काेही बस्द‌ैनन् बास । काेही हिड्दैनन् हटारुहरु । हिजाे जन्तिबासले पुर्याउथ्याे कर्णाली क्षेत्र । आज यसैकाे शिरबाट हिडेकाे छ कर्णाली जुम्ला राजमार्ग । सुर्खेत, बड्डिचाैर हुँदै कल्यानकांध उक्लेपछि कर्णाली राजमार्गकाे कालाेपत्रेकाे अहमताले कहिल्यै नाता जाेडेन जन्तिबाससँग । गन्तव्य एउटै थियाे । मात्र कालखण्ड फरक भाे ।
नेपाल एकिकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहकाे बखान गर्दा कालु पाण्डेकाे रगतकाे बलिदानी इतिहास मिचिए झैं मिचिदियाे यसले जन्तिबासलाई । स्कुले बालक र आधुनिक बाबुआमाले शिशुका नाम फेरे झैं पुराना रैथाने गाउँका नामहरु फेरि दियाे राजमार्गले । कल्यानकांध कल्यान बन्याे । ठुलाेआवत मसिना बन्याे । ओदालताल र हुड्केका थांईगाेठ अनि बासहरु बिरानीय । मालचना, केराघारी , सेप्टि र पातालखाेलाहरु नयाँ बनेर अघि सरे ।
हिजाेकाे यात्राले जल, शिरेटाे, थकान, आनन्द र बास दिन्थ्याे । आजकाे यात्राले सहजता, रिंगटा, दृष्य, खाना र अभाव मात्र दियाे । अझै त कल्यानकांधका पत्रे ढुंगामाथिकाे बाटाे, लखरपाटा डाँडाकाे चाैताराे र जन्तिबासका यात्रीसँग भेट गर्न छुटायाे भने गिमिने, भम्की र बिउरेनीलाई पाखा लगाईदियाे ।
मेरा बाजेहरुसँग राति अगेनामा आगाे ठाेस्ने कालाे भूत, च्याउमुढा, रिङ्नेश्वति हुँदै भिरहरु र कर्णाली बगरमा राँकाे बाेकेर दाैडिने राँके भूतहरु अनि बिहानीकाे मिरमिरेमा सुरिलाे कण्ठमा खसमसीने चुरेट्टी दिदीबहिनीहरु के गर्दै हाेलान ? हल्गाडेकाे चर्चित जमधूत, जाे हर रात महिला बटुवालाई पिरल्थ्याे, बलजफ्ती गर्थ्याे, के गर्दै हाेला ?
जन्तिबास बसाईकाे तिथि मिल्थ्याे तर बाबु मिल्थेन रे चाकुराम काकाकाे । यसैले काकाकाे खासै थरगाेत्र मिलेकाे थिएन । के लाग्छ, शक्ति न हाे काका भने संसद छिरेछन् । खुबै सक्रिय भए रे । केही गरेनन् उनले नि । जन्तिबासका यी पात्रहरु मरे मरेनन् । के भए हाेलान ? उनीहरुका सन्तति भए कसरी गर्दै हाेलान् जाेहाे । बाजेले मेराे बाल मगजमा भरिदिएका यी त्रासिला कथाहरुले भने बुढ्याैली बाेकी सके ।
जन्तिबासका नव जाेडीहरुकाे गर्भका नाति, पनाती, सन्ततिहरु कैयाैं पाईला ओहाेरदाेहाेर गरिसके तर काेही झर्दैनन् जन्तिबास । जन्तिबासले उमारेकाे प्रीति, जन्माएका काका र विकास सबै विराना बनि दिए आफैलाई । इतिहास मिचिएकाे मेराे जन्तिबास थिलाेथिलाे छ । न रुन सक्छ । न आफ्ना लागि बाेल्न सक्छ । जन्तिबासका लागि उस्तै छ रिङ्नेश्वति । उस्तै छ च्याउमुढा । मेराे प्याराे जन्तिबास………
स्मृति: फिनिबाजादेखि युट्युवसम्म १ हप्ता पहिले
कथा: कठै बरा ! मेरो कालो भड्डु !! ३ हप्ता पहिले
९ प्रतिशत वढीका दरले शेयरमूल्य वृद्धि भएका यी सात कम्पनी ? ४ मिनेट पहिले
चीन सरकारले भन्याे, ठूलो संख्यामा बाहिर ननिस्किनु १० मिनेट पहिले
करोडौं राजश्व छली गरेको आरोप आएपछि माझी समुदाय त्रसित २५ मिनेट पहिले
सम्पादक धम्क्याउने बस्नेतमाथि प्रेस युनियनले गर्याे कारबाहीको माग ३० मिनेट पहिले
बिहीबार यी पाँच कम्पनीले गरे सर्वाधिक कारोबार ? ३९ मिनेट पहिले
डोटीका फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एक हजारले खाेप लगाउने २४ घण्टा पहिले
नेपालमै पहिलो पटकः क्याल्सियम भरिएको मुटुको नशाको बिना शल्यक्रिया उपचार २४ घण्टा पहिले
नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्दै ज्योति विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न २३ घण्टा पहिले
लघुवित्तले पायो ४ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति २३ घण्टा पहिले
आज प्रधानमन्त्री कपमा वाग्मती र त्रिभुवन आर्मी खेल्दै ८ घण्टा पहिले
गण्डकीमा कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप आइपुग्याे ३ दिन पहिले
नयाँ ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्वाचनको घोषणा : ओली ३ दिन पहिले
कानूनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न २ हप्ता पहिले
नेकपाको वैधानिकता विवादको निरूपण गर्न प्रक्रिया सुरु ३ हप्ता पहिले
छुट्टाछुट्टै स्थानबाट एक महिलासहित पाँच जना पक्राउ ३ दिन पहिले
ओलीको कदमविरुद्ध कपाल मुण्डन गर्न खोज्दा प्रहरी हस्तक्षेप २ हप्ता पहिले
गुमनाम रहेको चिया प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह सक्रिय २ महिना पहिले
गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा आउने जानकी मन्दिरका महन्थको चेतावनी २ वर्ष पहिले
भिसा म्याद थप गर्न विदेशी पर्यटकको आग्रह ६ महिना पहिले